[Ukara] Dịghachi Data si iOS Device - How-na-eduzi
Nweta malitere, na-ndị dị mkpa
dr.fone Toolkit - iOS Data mgbake: How To
Part 1. Dịghachi Data si iOS ngwaọrụ ozugbo
Part 2. Dịghachi Data si iTunes ndabere
Part 3. Dịghachi Data si iCloud ndabere
Ẹkedori dr.fone Toolkit na kọmputa gị. Jiri USB cable na-abịa na gị iOS ngwaọrụ jikọọ gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka, gị na kọmputa. Pịa na "Data Recovery" ma họrọ "naghachi n'aka iOS Ngwaọrụ" nhọrọ.
Atụmatụ: Tupu na-agba ọsọ dr.fone, ị na-kwesŽrŽ ibudata ọhụrụ version of iTunes. Iji zere na-akpaghị aka mmekọrịta, adịghị ẹkedori iTunes mgbe na-agba ọsọ dr.fone Toolkit. M na-atụ aro na ị na gbanyụọ automatical syncing na iTunes tupu: ẹkedori iTunes> Mmasị> Ngwaọrụ, elele "Prevent iPods, iPhones, na iPads si syncing na-akpaghị aka".
Nzọụkwụ 2. Iṅomi gị Ngwaọrụ maka Lost Data on Ọ
Nanị pịa "Malite iṅomi" button ka a na usoro iṅomi gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka ka ike iṅomi maka ehichapụ ma ọ bụ furu efu data. The ịgụ isiokwu g usoro wee dịruo a nkeji ole na ole, dabere na ego nke data na ngwaọrụ gị. N'oge ịgụ isiokwu usoro, ma ọ bụrụ na ị na-ahụ na ndị data ị na-achọ ka e nwere, mgbe ahụ, i nwere ike pịa "kwusi" button iji kwụsị usoro.
Nzọụkwụ 3. Preview ndị scanned Data
The Doppler ga-ewe gị oge ụfọdụ. Ozugbo ọ dechara, i nwere ike ịhụ a Doppler N'ihi N'ịbụ mmemme. Data ma furu efu na ẹdude na ngwaọrụ gị na-egosipụta na ige. Iji iyo si na-ehichapụ data gị iOS ngwaọrụ, ị nwere ike swipe nhọrọ "Naanị-egosipụta-ehichapụ ihe" ka ON. Site na ịpị ụdị nke faịlụ na n'aka ekpe, ị ike ihuchalu hụrụ data. Ma i nwere ike ịhụ na e nwere search igbe n'elu nri nke window. I nwere ike ịchọ a kpọmkwem faịlụ site na iji kọmputa ede a isiokwu na search igbe.
Nzọụkwụ 4. Dịghachi Data si gị iPhone / iPad / iPod aka
Mgbe ị na-ahụ data gị mkpa, dị nnọọ na-etinye ego akara n'ihu igbe họrọ ha. Mgbe ahụ, pịa "Naghachi" button na ala n'aka nri nke window. Site ndabara, natara data ga-azọpụta gị na kọmputa. Ma ozi ederede, iMessage, kọntaktị, ma ọ bụ na ndetu, mgbe ị pịa Dịghachi, a mmapụta ga-ajụ gị ka ị 'Dịghachi na Computer "ma ọ bụ" Dịghachi na Device ". Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ndị a ozi azụ gị iOS ngwaọrụ, pịa "Naghachi na Device".
Nzọụkwụ 1. Họrọ Recovery Mode
Ẹkedori dr.fone ma họrọ "naghachi n'aka iTunes ndabere File" si "Data Recovery" ngwá ọrụ. Mgbe ahụ, iTunes ndabere mgbake ngwá ọrụ ga chọpụta niile iTunes ndabere faịlụ a na kọmputa na na-egosipụta na ha na window. Ị nwere ike gosi nke na otu onye bụ onye ị chọrọ dị ka ụbọchị ọ e kere.
Họrọ iTunes nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na e dere ihe data ị chọrọ iji naghachi ma pịa "Malite iṅomi". Ọ ga-ewe nkeji ole na ole wepụ niile data si iTunes ndabere faịlụ. Nwee ndidi.
Nzọụkwụ 3. Preview na Dịghachi Data si iTunes ndabere
Mgbe a ole na ole sekọnd, niile data na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ a ga-amịpụtara na-egosipụta na ige. Ịnwere ike ihuchalu ha otu otu n'ihu mgbake. Mgbe ahụ ị pụrụ bibiri akara na naghachi ndị na ị chọrọ site na ịpị "Naghachi" button na ala. Ugbu a kọntaktị, ndetu na ozi pụrụ ozugbo natara gị iOS ngwaọrụ ma ọ bụrụ na ị na-gị na iOS ngwaọrụ ejikọrọ na kọmputa gị site na a USB cable n'oge mgbake usoro.
Atụmatụ: i nwere ike ịhụ na e nwere search igbe na N'ihi window. Site n'ebe ahụ, i nwere ike pịnye ke aha nke a file ịchọ ya.
Mgbe na-agba ọsọ dr.fone Toolkit, họrọ mgbake mode nke "naghachi n'aka iCloud ndabere Files" si "Data Recovery" na dashboard. Mgbe ahụ ị ga-ahụ na window n'okpuru. Tinye iCloud akaụntụ na paswọọdụ nbanye. dr.fone ewe nzuzo gị kpọrọ ihe. Ọ dịghị mgbe anyị na-a ndekọ nke ọ bụla gị na Apple akaụntụ Ama ma ọ bụ ọdịnaya n'oge ọ bụla gị sessions.
Mgbe ị na-ite n'ime iCloud, usoro ihe omume nwere ike ịhụ ihe niile iCloud ndabere faịlụ na akaụntụ gị. Họrọ onye na ebe ị na-aga na-agbake data na pịa na "Download" button.
Na mgbe ahụ na mmapụta ahụ, ị ​​nwere ike họrọ ụdị nke faịlụ na ị ga-achọ ka download. Nke a ga-ebelata oge nke na nbudata na iCloud ndabere faịlụ. Mgbe ahụ, i nwere ike iṅomi iCloud content now. Pịa na "iṅomi" button na-amalite. Ọ ga-ewe gị oge ụfọdụ. Ka chere a oge.
Nzọụkwụ 3. Preview na Dịghachi Data si iCloud ndabere File
The Doppler ga-ezu na a nkeji ole na ole. N'otu oge, ọ na-akwụsị, ị nwere ike ịhụchalụ fọrọ nke nta niile data gị iCloud nkwado ndabere na mpaghara faịlụ, dị ka ozi kọntaktsị, foto, na ọzọ. Lelee ha otu otu na nne Mmetụta na ihe ịchọrọ. Mgbe ahụ, pịa na "Dịghachi na Computer" ma ọ bụ "Dịghachi ngwaọrụ gị" button ịzọpụta ha na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ gị na otu click.
Ugbu a kọntaktị, ozi na ndetu pụrụ ozugbo natara gị iOS ngwaọrụ ma ọ bụrụ na gị na iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka na jikọọ na gị na kọmputa na a USB cable n'oge mgbake usoro.
Wụnye, Update, iwepụ